Ny androaniko | Oktobra 2016
[Ankapobeny ] 27 Oktobra, 2016 13:01
Azo atao ve ny misoroka ?
Nihetsika indray ny tany aty aminay, tsy lavitra anay, tsy lavitra ilay toerana efa voa tamin'ny volana aogositra - 100 km eo ho eo avy eto Roma, adiny iray eo ho eo raha atao amin'ny fiara. Naheno tsara izany horohorontany izany ny Romanina satria tamin'ny 7 ora hariva izany omaly ; misy ny izay vao niala tany am-piasana, misy ny efa tafody tany an-trano, sns. Ikalamako aloha isan'ny tsy naheno fa ny vaovao tamin'ny 8 ora alina no nanaitra azy nefa izy dia teo am-pikarakarana sakafo hariva tamin'io ora nihetsehan'ny tany io. Dia nihetsika fanindroany hono tamin'ny 9 ora alina. Dia mbola tsy nahare koa ikalamako nefa tamin'ny 9 ora alina latsaka fahefany izy dia efa tany am-pandriana fa somary manarinaritra izay - izany hoe tokony ho naheno satria tokony nihozongozona ny fandriana.
Asa re, sao dia tsara fototra ny trano onenanay ? izahay rahateo ato ambany rihana (asa ry tompon-trano ao ambony na nahare na tsia - mila anontaniako azy izay fa toa hafahafa ihany raha tena ikalamako irery no tsy naheno - izy mianaka mbola tany ivelany ka mety tsy nahare n'inon'inona). Sa somary efa aty atsimon' Roma izahay, zany hoe somary lavitra kokoa ny ivon'ilay horohorontany ka efa mihena ny herin'lay izy ? (nefa dia 20 km eo ho eo fotsiny ny manasaraka ny avaratra sy atsimon'i Roma - mila anontaniako koa ireo monina aty atsimotsimon'ny tànana aty - ilay zaodahiko ao Acilia toa mamaky ny blaogiko ara-dalana an - krkrkrkr). Na izany aza, efa nisy fotoana nihetsehan'ny tany tao avaratra afovoan'i Italia tao ihany (io mihitsy anie no tena faritra faizin'ny horohorontany e) dia naheno soa aman-tsara aho tamin'ny 2 ora maraina tany ho any tamin'izay. Sa ve hoe efa miha-antitra ? hmmmm
Fa ny alehan'ny saiko eto izany dia ity : ny tangoron-tendrombohitra Appennino no mamaritra iny toerana avaratra-afovoan'i Italia iny, mihazo mankany atsinanana ihany koa. Ary maro ny manam-pahaizana momba ny horohoron-tany no efa nampilaza fa hisedra izany hatrany io toerana io. Tsy hoe mpaminany izy ireo fa io no nianarany sy alalininy isan'andro eo ka hainy ny zavatra lazainy. Ny zava-mitranga rahateo manamarina izany hatrany.
Ka vazivazy ihany no nitondrako ilay resaka tamin'ilay namako tatsy hoe ny trano moa matoa afaka naorina teny na dia efa nazava hatrany am-boalohany aza fa tsy atokisana io faritra io fa ambany ziogan'ny horohorontany dia nahazoana alalana (iza no nanome alalana ?), na tsy mety tsy nangataha alalana (zay tiako ihany fa tsisy bedy). Mety tsy izay monina ao ankehitriny no nanorina fonenana tao, izany hoe tsisy idiran'ny taranaka aty aoriana ny maha-tompon'andraikitra na tsia, fa nandova tranon-drazana zareo dia izay.
Ka raha efa hay ary fa hisedra horohorontany foana iny faritra iny, raha tonga tokoa moa ny fampilazana fa mila miala eny izy ireo - aleo misoroka toa izay mitsabo - moa ve hanaiky izany izy ireo ? Ehhhh zay raolombelona izay manko. Hitako eto lay hoe eto ny tanindrazanay, tranon-drazanay ity, ny harenanay no laninay teto, ka ho aiza zahay raha hiala eto, teto no nahalehibe anay, sns sns (na dia atao aza hoe omena tanàna iray vaovao eny amoron-dranomasina izy ireo).
Ka hoy aho tamin' ilay namako hoe izany tsy hilatsahako ho filoham-pirenena fa io izao raha tany Madagasikara dia mbola hadisoan-dRajaonarimampianina ihany no nahatonga zao (taolana ny nify ka homehy)... eny e, satria izao moa dia efa misy ny mahasahy miteny hoe rahoviana no hihetsika ny tany ao amin'ny Lapan'i Montecitorio (izany hoe ny lapan'i Mahazoarivo aty aminay) dia mba tototra ao ingahy praminisitra... ndriiiii tsisy idiran'ny vitsika amin'ny solintany an !!!
Eritreritro moa zay. Mety tsy ho izay ny eritreritro raha nonina tamin'iny faritra iny aho ka namoy havana sy fananana... raha izaho moa no vita matavy tao dia tsy ho nisy ity lahatsoratra ity.
Mankahery hatrany ireo traboina sy namoy havana.